China Elbow fanohanana sy mpamatsy | qiangjing
Ny fanohanana ny elatra
Ny padika elatra, ho fitaovana fanatanjahantena matihanina, dia manondro karazana fitaovana miaro ampiasaina amin'ny fiarovana ny tadivavarana. Miaraka amin'ny fampandrosoana ny fiaraha-monina dia nanjary iray amin'ireo fitaovana ilaina fanatanjahantena ilaina ho an'ny atleta ny pad Padaly.
Habe: S, M, L na azo zatra
Loko: loko mainty na azo zatra
Fampiharana: lehibe sy ankizy
Fampitaovana: famindrana hafanana, pvc lable.etc
Manaiky ny OEM / ODM
Fitaovana: neoprene, nylon
Fampiasa: arovy ny elatra, manome fahatsiarovana tsara
Famaritana fohy momba ny vokatra:
Ny padika elatra, ho fitaovana fanatanjahantena matihanina, dia manondro karazana fitaovana miaro ampiasaina amin'ny fiarovana ny tadivavarana. Miaraka amin'ny fampandrosoana ny fiaraha-monina dia nanjary iray amin'ireo fitaovana ilaina fanatanjahantena ilaina ho an'ny atleta ny pad Padaly. Ny kodiarana dia iray amin'ireo mafy indrindra amin'ny vatan'ny olona. Ny mety ho ratra amin'ny kitran'ny atleta dia tena ambany, fa ny atleta ara-panatanjahantena matetika dia manao pataloha elatra mba hisorohana ny fahasimban'ny hozatra.
Ny andraikitra voalohany amin'ny padaly elatra dia ny fanomezana tsindry ary mampihena ny fivontosana; ny faharoa dia ny famerana ny hetsika ary mamela ireo faritra maratra harina indray. Mandritra izany fotoana izany dia tsara indrindra ny tsy manelingelina ny fiasan'ny tanana mahazatra, ka raha tsy ilaina dia tsy voan'ny satroka ny ankamaroan'ny padaly. Ny palitao sy ny palonon ny lohalika dia natao hiarovana am-balahana sy ny lohalika tsy maratra ary manao lava-bary malefaka na akorandriaka. Mba hampihenana ny lanjan'ny fitaovana, dia mamolavola ny lambam-pandriana sy ny boriky ny lohalika mba ho maivana kokoa, tsara tarehy kokoa, mety sy azo ampiharina.
Ny namana tia milalao tenisy, badminton, tennis de latabatra, rehefa milalao baolina, indrindra rehefa milalao lamosina, dia handratra ny kitroka, na dia manao dian-tongotra ny satroka aza dia lazain'ny manampahaizana antsika hoe malaza amin'ny hoe "tennis de soccer" izany. ny kitrony dia amin'ny ankapobeny mikapoka baolina, ny tadim-bolo dia tsy mivaky, ny fonosana dia tsy mihidy, ary ny hozatra extensor ny feon-tsambo dia miparitaka be loatra, ka mahatonga fahasimbana amin'ny teboka mipetaka. ny baolina, mba hahafahana mihamitombo ny fahasimbana amin'ny tonon-kintana. Koa rehefa milalao tennis ianao, raha mahatsapa fanaintainan'ny satroka ianao dia tsara kokoa ny mitafy braces amin'ny fehin-tanana raha mitafy lambam-pandriana izy. Ary rehefa misafidy padetaly ianao dia tsy maintsy misafidy ianao Raha tsara loatra ny elastika dia tsy hiaro anao ary tsy misikina mafy loatra na somary maivana be loatra, ho mafy loatra ny fihenan-drà ary tsy hiaro.
Mampiavaka ny fanohanan'ny elatra:
1 Fitsaboana hafanana: Ny hafanana hafanana sy malefaka dia fifantohan'ny ankamaroan'ny mpanazatra sy ny mpitsabo fanarenana mba hitsaboana ireo ratra sy tenda naratra. Ireo akora elatra dia vita amin'ny lamba elastika avo lenta, izay afaka mifamatotra tsara amin'ny tranokala ampiasaina mba hisorohana ny fihenan'ny hafanan'ny vatana, mampihena ny fanaintainana amin'ny faritra voakasik'izany ary mampihena ny fanarenana.
2 Mampiroborobo ny mivezivezy any amin'ny rà: Ny hafanana fitsaboana izay nitazoman'ny padon-tsipika dia mampiroborobo ny fikorianan-dra ao amin'ny vongan'ny hozatra amin'ny tranokala ampiasaina. Ity fiantraikany ity dia tena mahasoa ho an'ny fitsaboana ny arthritis sy ny fanaintainana miaraka. Ankoatr'izay, ny fikorianan'ny rà tsara dia afaka milalao tsara ny fiasan'ny môtô ary mampihena ny fisian'ireo ratra.
3 Fampivoarana sy fanamafisana: afaka manamafy ny tonon-taolana sy ligy ny sela matevina mba hanoherana ny fiantraikan'ny hery any ivelany. Miaro tsara ny tonon-taolana sy ny ligamentes.
4 maivana maivana sy marefo marefo, mahazo aina, tsara ny fanohanana sy ny vokatry ny bisikileta, afaka misasa milina, mora ampiasaina, mety amin'ny hazakazaka, lalao baolina sy fanatanjahan-tena any ivelany.
Fanohanana arak'asa akademika
Jereo manodidina ny kianja basikety hitadiavana zavatra ilaina amin'ny fiainanao andavanandro
Tamin'ny NBA tamin'ny taonjato farany, nanjary iray amin'ireo fitaovana fiarovan-tena ankafizin'ny maro kintana ny sombin-tsavony palitao. Ny fironana mitondra paroasy amin'ny alàlan'i Jordan. Tsy hoe misy fiantraikany fotsiny ny pad padan'ny elatra, fa koa mitana andraikitra manokana - antiperspirant effects. Mpanao swinging malaza maro an'i Jordania, toa an'i Penny Hardaway sy Grant Hill dia manao pataloha elatra koa.
Maninona no malaza be ny pad padan'ny elatra? Tsy misy isalasalana fa i Jordan no tsy vanona tamin'io taona io! Tamin'ny taonjato faha-21 dia mbola nitafy ny kitron-tanana i Jordan ary izy ihany no mitafy izany amin'ny tanany havia. Lasa kolontsaina iray miavaka ho an'ny lahiantitra izany fa tsy ny sehatry ny NBA ihany. Miaraka amin'ny satroka elatra amin'ny sandry, izay lasa fitaovam-piarovana miaro indrindra amin'ny fitsarana tamin'izany fotoana izany. Nianaranay fa manao pataloha elatra ny mpilalao, toa ny manaraka an'i Jordania. Tonga ny fotoana tamin'ny 2003. Nisotro ronono i Jordania. Eo amin'ny fitsarana dia tsy afaka mahita ny andriamanitry ny basikety intsony isika. Amin'izao fotoana izao, dia hita fa efa misotro ronono miaraka amin'i Jordan ihany koa ny padons elatra, fa nanomboka nanao saron-tanana (azo ampiharina kokoa). Kobe, AI, Pierce, Carter ary mpilalao hafa dia mametraka amin'ny sandriny ihany koa. Nentin'izy ireo tany amin'ny ligy indray ny onjam-tanana sandrin'ny tanana. Na dia hafa noho ny sombin-tanana kosa ny sandrin-tànana dia mbola tsara tarehy foana amin'ny endrika. Amin'izao fotoana izao, zara raha mahita ireo valim-baravarana elatra any amin'ny lapan'ny NBA, dia lasa fitaovam-piarovana mahazatra indrindra ny tanan'ny sandroka.
Raha ny tena marina, be dia be ny fampiasana ny fitaovan-tànana satroka amin'ny fanatanjahan-tena, tsy hoe satria manintona ihany.
1. Ny sandrin-tànana dia afaka miaro ny sandry amin'ny fomba rehetra, manatsara ny fitoniana ny fihodinan'ny sandry, ary mahatonga ny hozatry ny zatovo ho an'ny zatovo tsy mora maratra amin'ny fanatanjahan-tena mahery vaika.
2. Ny fehin-tànan'ny sandry dia afaka mitazona ny hozatry ny hozatry ny sandriny. Ny fitafy sandry mpiambina dia hiteraka fanerena eo amin'ny hoditry ny zanak'olombelona, ​​hisorohana ny fihenan'ny hozatra ary hampiakatra ny fikorianan'ny ra ao amin'ny hoditra. Io fihenjanana io dia hanohana ny tanjaky ny hozatra ary hanatsara ny fampandehanana atletika.
3. Ny fehin-tànana dia afaka mitazona ny mari-pana amin'ny sandriny. Ny fikojakojana ny mari-pana dia ahafahana miantoka fa tsy ho very mora foana ny angovo azo avy amin'ny sandry. Afaka mitazona hafanana ihany koa ny fiambenana sandry rehefa mivoaka amin'ny ririnina.
4. Mitaova saron-tànana mba hisorohana ny aretin-koditra, fikapohana ary fikosehana. Raha sandry mpiambina manana toham-baravarankely amin'ny sela izy io, dia afaka misoroka koa ny fianjerana ary hianjera.
5. Ny tànan'ny sandry dia miaro ny masoandro. Fanatanjahantena ivelan'ny masoandro eo ambanin'ny tara-masoandro mafana amin'ny fahavaratra dia mety hampihena ny fanondroana ny hoditra amin'ny ratra ultraviolet.
Previous: Fanohanana ankosotra
Manaraka: Fonon-tanana fanatanjahantena
Ny fehikibo nylon
Fehikibo fehikibo miaraka am-paosy
Fenon-tsipika vita amin'ny fehikibo volamena